यसरी पोखिन् सारंगाले आफ्नो पुनःविवाहको खुशी
काठमाडौं । तपाइँ फेसबुकमा नायिका सारंगा श्रेष्ठको साथी हुनुहुन्छ भने उनले लेखेका स्ट्याटसहरुबारे पक्कै जानकार हुनुहुन्छ । अनि उनका ती स्ट्याटस पढेर उनी कवि पो भइछिन् भन्ने पनि लागेको होला । हो, सारंगा अहले प्रेममा डुबेर कवि बनेकी छिन् ।
प्रेमले कवि मात्रै बनाएन । सारंगालाई । उनी चाँडै पुनः विवाह बन्धनमा समेत बाँधिने भएकी छिन् । चार वर्षअघि अमेरिका भासिएकी सारंगाको अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको केही समयमै डिभोर्स भएको थियो । त्यसपछि एक्लै अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा बस्दै आएकी उनले त्यहीं बस्ने नेपाली रमेश कार्कीसँग विवाह गर्ने भएकी हुन् । सारंगाले रमेशसँग औंठी साटेर इंगेजमेन्ट गरेको फोटो समेत फेसबुकमा राखेकी छिन् । रमेश रेष्टुराँ व्यवसायी हुन् ।
संयोग कस्तो परेको छ भने नेपालमै छँदा सारंगा नायक रमेश उप्रेतीको गर्लफ्रेन्ड भनेर समेत चिनिन्थिन् । अमेरिकामा समेत सोही नाम गरेका व्यक्तिसँग सारंगको विवाह हुने भएको छ । नायक उप्रेतीसमेत अहिले अमेरिकामै छन् ।
रमेशले औंठी लगाइदिंदै गरेको फोटोमाथि सारंगाले लेखेकी छिन्, 'हरेक व्यक्तिलाई सँगै जानका लागि 'त्यो' एकदनिको खाँचो हुन्छ । जुन दुःखी नहुनुपर्ने दिन पनि हो ।'
आफूले समेत उक्त खुशी हुने दिन पाएको बताउँदै उनले थपेकी छिन्, 'अनुहारमा मन्द मुस्कान छर्दै आफ्नो सपना सत्यमा परिणत गर्ने दिन हरेक मानिसलाई आवश्यक हुन्छ । एकैदिनमा यी सब कुरा हुनु बडो गज्जब हो । यही गज्जबको एक दिन र्मैले पनि पाएको छु, जहाँबाट मेरो जीवन पुनः शुरु हुनेछ ।'
त्यसभन्दा तीन दिनअघि सारंगाले सुन्दर जीवन दिएकोमा भगवानलाई धन्यवाद समेत दिएकी थिइन् । उनले अगाडि लेखेकी छिन् ,'तिम्रो आत्मादेखि टाढा म कहाँ जान सक्छु ? तिम्रो अनुपस्थितिमा म कहाँ भाग्न सक्छु ? यदि म माथि स्वर्गमा पुगें भने तिमी त्यही हुनेछौ । गहिराइमा मैले ओछ्यान लगाएँ भने पनि तिमी त्यही हुनेछौ । विहानीमा पखेंटा फैलाएर नदी निारमा पुगें भने पनि तिम्रा हातले मलाई इशारा गरिरहनेछन् ।'
केही दिनमै कानुनी विवाह गर्ने उनीहरुले ६ महिनापछि नेपाली परम्पराअनुसार विवाह समेत गर्ने भएका छन् । अधिकांश नेपाली अभिनेत्रीहरको वैवाहिक जीवन असफल हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहँदा सारंगाको दोस्रो वैवाहिक जीवनले कुन मोड लिने हो ? कतै उनले फेसबुकमा लेखेजस्तै हुने त होइन, 'प्रेम मुस्कानबाट शुरु हुन्छ, चुम्बनसँगै हुर्कन्छ अनि आँशु बनेर टुंगिन्छ ।'